Labo ababhekene nokuhlaselwa okungaphezulu kwe-150.000 DDoS baboshwe | Izindaba zamagajethi
Ngaphansi kwegama lokuhlaselwa DDoS Sithole uhlelo lapho umhlaseli ezozama ukukhukhula iwebhu ngezicelo zokufinyelela. Ngalokhu kuhlaselwa futhi uma sikwazi ukwenza izicelo zanele, isiphakeli sizofinyelela iphuzu lapho singakwazi ukuphendula kuzo zonke futhi sizoshayeka. Lolu hlobo lokuhlaselwa aluphuli ukuphepha kwensiza esiyinikezayo kepha imkhubaza amahora ambalwa.
Le ndlela yiyona kanye ekhethwe ngu israelis eneminyaka emibili engu-18, owaziwa njengo-itay Huri noYarden Bidani, owayengasolwa ngokwethula insiza enkulu yokuthengisa ama-software eDDoS emhlabeni. Ukungena emininingwaneni ethe xaxa, gqamisa ukuthi le ntsha ingabenzi besitolo I-vDOS, isevisi eku-inthanethi ethengiswe ngokoqobo uhlelo olungayilungele ikhompyutha ngokufunwa kakhulu Iyakwazi ukwenza zonke izinhlobo zokuhlaselwa kwe-DDoS kumaseva.
Ababili abaneminyaka engu-18 bazobhekana nokuhlaselwa okuningi kwe-DDoS okwenziwe eminyakeni yamuva
Ngokusho kochwepheshe, isayithi le-vDOS libukeka njenge obhekene nokuhlaselwa okuningi kwe-DDoS okwenzekile emhlabeni eminyakeni yamuva. Ngenxa yokwenza ukuhlasela okungaphezu kuka-150.000, abaduni abasha bebazokwazi ukufaka imali ethile eduze ne I-600.000 euro. Usemningi umsebenzi okusamele wenziwe njengoba kusafanele kuqoqwe ubufakazi bese kufakwa namacala. Okwamanje lezi zinsizwa zombili zisaboshelwe endlini kanti ijaji selizinqabele ukusebenzisa i-intanethi izinsuku ezingama-30.
Mayelana nokuthi ungathola kanjani ukuthi ngubani obangela le nsizakalo eyingqayizivele, yisho ukuthi kuyindida ukuthi leli cala lonke lavela ngoba isevisi yakho ye-vDOS yangenelwa yinkampani yonogada eyayike yahlaselwa okunye kokuhlaselwa kwayo. Ngenxa yalokhu bakwazi ukuthola uhlu lwamakhasimende futhi ukusuka lapho bakwazi ukudalula ukuthi bangobani laba bantu abasha ababili.
Ukwaziswa okwengeziwe: I-KrepsOnSecurity
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » Labo ababhekene nokuhlaselwa okungaphezulu kwe-150.000 DDoS baboshwe
Izinkinga zeSamsung ziyakhula manje sekungunqenqema lwe-Galaxy S7 eqhume phakathi nendawo yokudlela